Izindwangu zokugqoka amakha amakhabethe | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Izikhwama zendwangu zokwenza amakha amakhabethe
UToñy Torres | | Yezandla ngendwangu, Imisebenzi yezandla yasekhaya
Lezi zikhwama zendwangu zokwenza amakha amakhabethe zingumphelelisi ofanele ukubeka kunoma iyiphi ikhabethe noma isembatho lapho ugcina khona izingubo. Kulula kakhulu ukukwenza lokho ntambama efanayo ungenza izikhwama eziningi ngangokunokwenzeka, ngoba ziyasebenziseka, ziyabukisa futhi zilungele ngisho nezipho.
Ngoba noma iyiphi ikhabethe lingabamba iphunga, ngenxa yomswakama phakathi kwezinye izinto futhi ube ne- ukuvuselela umoya Imvelo phakathi kwezingubo izovimbela lelo phunga ekunamatheleni ezindwangu. Akunasidingo sokusebenzisa amakhemikhali futhi akukho namakhono okuthunga, ungakha ama-air fresheners wamakhabethe ngokwakho. Ngaphezu kwalokho, zinhle kakhulu kangangokuba kuyintokozo ukuvula ikhabethe bese uthola lezi zikhwama zendwangu.
1 Izikhwama zezindwangu zamakhabethe, isicwenga esenziwe ekhaya
1.1 Isinyathelo ngesinyathelo
Izikhwama zezindwangu zamakhabethe, isicwenga esenziwe ekhaya
Izinto esizodinga yilezi:
Indwangu yemidwebo oyikhethile, futhi ingaba bushelelezi. Okubalulekile akubalulekile, kepha kukhethwa ukotini
Potpourri noma izimbali ezomisiwe
Okungamanzi i-lavender, isinamoni noma iphunga lakho olithandayo
Okokuqala sizodweba izilinganiso endwangu kwakudingeka ukudala izikhwama zendwangu. Lezi zilinganiso ziyalinganiselwa futhi azidingi nokuthi ziqonde ngqo.
Sisika izingcezu ezimbili zendwangu ukwakha isikhwama ngasinye kwendwangu. Sika izingcezu eziningi zendwangu ngendlela esifuna ngayo, zingaba ngosayizi abahlukahlukene.
Sibhekene nezicucu zendwangu futhi faka ungqimba oluvulekile lwendwangu yokunamathisela. Sibeka izingcezu ezimbili bese siyacindezela. Ungafaka okokufaka okokugqoka ukuze uthandele inyunyana ngenkathi iglue loma.
Siphinde senze umphetho omncane embobeni ephezulu, ngakho-ke kuzoqapha kakhulu. Siphinda izinyathelo zazo zonke izingcezu zendwangu, uze ube nezikhwama eziningi zekhabethe lendwangu njengoba ufuna ukuzenza.
Sivumela ukuthi ingcina yome ngokuphelele, lapho isilungile, siphenya izikhwama zendwangu.
Sigcwalisa izikhwama zendwangu ngezimbali ezomisiwe noma imbiza. Yize sebenalo iphunga, sifaka amaconsi ambalwa we-liquid essence ukwenza iphunga liphikelele futhi lihlale isikhathi eside.
Sivala izikhwama zendwangu ngebhande le-elastic. Sisika ucezu lweribhoni le-satin salufaka ifindo phezu kokunwebeka ukuhlobisa amasaka ethu anamakha amakhabethe. Futhi usulungile, sesivele sinezikhwama zethu esilungele ukuzibeka kulowo ogqoka, idilowa lezinto zokulala ngisho nokuhlobisa ishalofu futhi ngaleyo ndlela ugcobe igumbi lakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yasekhaya » Izikhwama zendwangu zokwenza amakha amakhabethe
I-Hippie pendant eyenziwe nge-CD
Eva amabhukumaka enjoloba